भ्यालेन्टाइन विक : आज चकलेट डे, स्वास्थ्यलाई फाइदा कि बेफाइदा? – Health Post Nepal
भ्यालेन्टाइन विक : आज चकलेट डे, स्वास्थ्यलाई फाइदा कि बेफाइदा?
२०७८ माघ २६ गते १२:२६
काठमाडौं – ‘प्रपोज डे’ पछि भ्यालेन्टाइन विकको तेस्रो दिन अर्थात फेब्रुअरी ९ लाई ‘चकलेट डे’को रुपमा मनाइन्छ। यस दिन जोडीहरूले एकअर्कालाई चकलेट उपहार दिन्छन् र आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्छन्। चकलेट डे आउनुअघि नै बजारमा धेरै प्रकारका चकलेट आउन थाल्छन्। युवा जोडीहरूमा चकलेट डेको क्रेज धेरै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं दुवैलाई मिठो मनपर्छ र केही राम्रा सम्झनाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस दिनलाई अवश्य सेलिब्रेट गर्नुस्।
चकलेट सबै उमेर समूहका मानिसलाई मन पर्ने कुरा हो। तर, सबैका लागि चकलेट उपयुक्त नहुन सक्छ। अर्थात गुलियो खान नमिल्ने बिरामीहरुका लागि यो उपयुक्त हुँदैन। चकलेटका फाइदा बेफाइदा दुवै छन्। यसबारे चर्चा गरौं।
खुसी र मुड राम्रो बनाउँछ – चकलेट स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक पनि मानिन्छ। चकलेटमा धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू हुन्छन् जुन तपाईंको रक्त प्रवाह, मुटु र छालाको लागि लाभदायक मानिन्छ। साथै, चकलेट खाँदा मुड पनि राम्रो हुन्छ। जब मूड राम्रो हुन्छ, मस्तिष्कमा केही रसायनहरू उत्तेजित हुन्छन्, जसले एन्डोर्फिन हार्मोन रिलिज हुन्छ। एन्डोर्फिनको रिलिजले तपाईंलाई खुसी महशुस गराउनुको साथै मुड पनि राम्रो बनाउँछ।
तनाव कम हुन्छ – यदि तपाईं चकलेट खानुहुन्छ भने त्यसले तनावबाट तपाईंलाई टाढा राख्छ। चकलेटमा पाइने फ्लेभोनोइड नामक एन्टिअक्सिडेन्टले तनाव र चिन्ताको समस्यालाई हटाउँछ। चकलेटले तनाव पैदा गर्ने हर्मोनलाई निस्कन दिँदैन। साथै, प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ, उच्च रक्तचाप हुँदैन र कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि नियन्त्रणमा रहन्छ।
दिमाग स्वस्थ बनाउँछ – धेरै अध्ययनहरुले दिनहुँ चकलेट खाने वा चकलेट पेय पदार्थ सेवन गर्नेहरूको मस्तिष्क स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरिसकेका छन्। यसले स्मरण शक्ति पनि बलियो बनाउँछ। चकलेटले मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार पनि सुधार गर्छ।
छालालाई चम्किलो बनाउँछ – चकलेटमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जुन छालाका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। चकलेट खानेहरुको छालामा उमेरको प्रभाव कम देखिन्छ। आजकल चकलेट फ्लेवर भएका धेरै प्रकारका फेसप्याकहरु पनि आउन थालेका छन् जसको प्रयोग गरेर तपाईं चम्किलो र सुन्दर छाला पाउन सक्नुहुन्छ।
चकलेटले राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँछ – सम्पूर्ण शरीरमा मुटु स्वस्थ रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मुटुको धड्कन ठीकसँग चलिरह्यो भने शरीरका अन्य भागमा पनि रक्तसञ्चार ठीक हुन्छ तर रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्यो भने विशेष गरी खराब कोलेस्ट्रोल, यसको नकारात्मक प्रभाव सबैभन्दा पहिले मुटुमा पर्छ। डार्क चकलेटले रगतमा रहेको खराब कोलेस्ट्रोललाई हटाएर राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँछ।
चकलेटले सक्रिय बनाइराख्छ – चकलेट खाने मानिसहरू अरूको तुलनामा बढी सक्रिय रहने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन्। चकलेटमा केही त्यस्ता तत्व हुन्छन् जसले हामीलाई सक्रिय र फुर्तिलो बनाउँछ।
तौल बढाउँछ – हो, यदि तपाईं तौल बढाउन चाहनुहुन्न भने सबैभन्दा पहिले मिल्क चकलेट खान छोड्नुहोस्। मिल्क चकलेटले तपाईंको तौल द्रुत गतिमा बढाउँछ। त्यसमा हुने फ्याट र क्यालोरीले तपाईंको शरीरलाई भरिपूर्ण बनाउँछ, जसले तपाईको तौल बढाउँछ। त्यसैले तौल नबढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चकलेट खान छोड्नुस्।
अनिद्रा र टाउको दुखाइ – यदि तपाईं राती चकलेट खानुहुन्छ भने तपाईंलाई समस्या हुनसक्छ। किनभने चकलेट खाँदा निद्रा लाग्दैन। चकलेटमा एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याटी एसिड र डायट्री मिनरल्स पाइन्छ। यसका साथै यसमा क्याफिन हुन्छ, जसका कारण तपाईंलाई निद्रा लाग्दैन र यसमा पाइने थियोफिलाइनको कारणले तपाईंलाई टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ।
इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम – चकलेटमा क्याफिन हुन्छ। क्याफिनको अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्दा पखाला र इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम जस्ता समस्या हुनसक्छ।
उच्च रक्तचाप – चकलेटमा धेरै मात्रामा क्याफिन हुन्छ। जसका कारण कहिलेकाहीँ तपाईको रक्तचाप निकै छिटो बढ्छ, जसको तपाईं अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उच्च रक्तचापको समस्या भएका व्यक्तिले चकलेट खानु हुँदैन। कम रक्तचाप भएकाले यसको सेवन गर्नुपर्छ।
हड्डी कमजोर हुन सक्छ – चकलेटमा पाइने कोकोआले शौचालयको माध्यमबाट शरीरबाट क्याल्सियम निकाल्छ। यस कारणले गर्दा तपाईंको हड्डी कमजोर हुन सक्छ, जसलाई ओस्टियोपोरोसिस पनि भनिन्छ। धेरै वर्षपछि यसको लक्षण देखिन थाल्छ।
दाँतमा समस्या – चकलेटमा चिनीको मात्रा बढी हुँदा दाँतलाई हानि पुर्‍याउँछ र यसै कारण बालबालिकालाई यसको कम सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ। धेरै मीठो चीजहरू खाँदा दाँत सड्न सक्छ।
चकलेटको लत बस्न सक्छ – चकलेटमा पाइने क्याफिन र अन्य एल्कालोइड्स र एमाइन्सले यसको लत बसाउन सक्छ।